21.03 Maharitra amin'ny tenin'Andriamanitra
Anio Alarobia 21 Marsa 2018 dia ny Apokalypsy 2.18-29, no sakafom-panihintsika ka hojerentsika ao anatin' io ny hoe inona no lazainy momba an' Andriamanitra Ray ? Jesoa Kristy na ny Fanahy Masina ? sy ny hoe inona no fahamarinana azoko raisina avy amin' izao tenin' Andriamanitra izao ?
18 Ary soraty ho amin’ ny anjelin’ ny fiangonana any Tyatira : Izao no lazain’ ny Zanak’ Andriamanitra, Izay manana maso toy ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahina manganohano :
19 Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao, ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany.
20 Kanefa manan-teny aminao Aho, satria hianao mandefitra amin’ ilay vehivavy Jezebela, izay milaza ny tenany ho mpaminanivavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanompoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin’ ny sampy.
21 Ary nomeko andro hibebahany izy, nefa tsy mety mibebaka amin’ ny fijangajangany izy.
22 Indro, hampandamahiko eo am-pandriana izy, ary izay mijangajanga aminy dia hataoko ao amin’ ny fahoriana lehibe, raha tsy hibebaka amin’ ny asan-dravehivavy izy.
23 Ary hovonoiko amin’ ny fahafatesana ny zanany; ary ny fiangonana rehetra hahalala fa Izaho no mandinika ny voa sy ny fò; ary homeko araka ny asanareo avy hianareo rehetra.
24 Fa aminareo izay sisa any Tyatira, dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon’ ireo hoe "sain-dalin’ i Satana", dia izao no lazaiko : tsy hovesarako entana hafa hianareo;
25 kanefa izay anananareo dia tano mafy mandra-pihaviko.
26 Ary izay maharesy ka mitandrina ny asako hatramin’ ny farany dia homeko fahefana amin’ ny jentilisa;
27 ary hiandry azy amin’ ny tehim-bý izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany, dia araka izay efa noraisiko tamin’ ny Raiko.
28 Ary homeko azy ny kintana fitarika andro.
29 Izay manan-tsofina, aoka izy hihaino izay lazain’ ny Fanahy amin’ ny fiangonana.
MAHARITRA AMININ’NY TENIN’ANDRIAMANITRA
Tsy azo anafenana na inona na inona ny Tompo, tsy azo fitahana Izy.Ny masony dia mahita sy mitaratra hatrany anatin’ny fisainana sy ny fon’ny olona lalina indindra.
Izay no azo ilazana itý Fiangonana tao Tiatira itý : fitiavana, finoana, fanompoana, faharetana samy nananany ary nitombo hatrany tamin’izany nyFiangonana.
Toa Fiangonana tsy azon’iza na iza omena tsiny na toherina: Fiangonana velona amin’ny fitiavan’i Kristy ary tena miasa sy maharitra amin’izany.
I Jezebela dia ilay vehivavy mpijangajanga sy mpanompo sampy nikoizana.
Ny fanahin’ny fijangajangana sy ny fanompoan-tsampy no ampitain’ny Tenin’Andriamanitra amin’izany fanahin’i Jezebela izany.
Izany no noleferin’ny Fiangonana tao Tiatira, nisy olona nivoy sy niaina izany.
Maharikoriko ny Tompo izany ary tsy maintsy hofongoriny hatramin’ny taranak’izay miaina izany raha tsy mibebaka Aminy.
Handresy sy hanam-pahefana toa Azy.
Izay mifikitra amin’ny Tenin’Andriamanitra marina ihany no afaka hanohitra ny rivom-paharatsiana izay hafafin’i Satana ka handresy azy.
Ny Fiangonana sy ny olona toy izany no iantefan’ny tenin’ny Tompo hoe raha mahatoky amin’ny kely dia ho ataony hanapaka ny be (Matio 25.21,23).
Ny Tenin’Andriamanitra IHANY
no fanilo sy fanazavana ny lalantsika
hahitantsika ny lalan-kombana eto amin’itý izao tontolo izao itý,
izay efa tena feno fahalovana, fahapotehina
noho ny fahafenoin’ny faharatsiana rehetra entin’ilay ratsy.